PressReader - Ilanga: 2018-11-22 - Kugwetshwe umqashi othengele isisebenzi inkabi
Kugwetshwe umqashi othengele isisebenzi inkabi
ZITHOLELE I-POSTER YE-CHIEFS NEYE-PIRATES NGAPHATHI WINA AMATHIKITHI E-SOWETO DERBY
Ilanga - 2018-11-22 - Front Page - SKHOSIPHI MTHEMBU
USHAYWE ngoswazi oluncane yiNkantolo yesiFunda yaseShowe izolo ngoLwesithathu umqashi owathenga inkabi ukuba ibulale isisebenzi sakhe, emuva kokuba simmangalele.
Le nkantolo igwebe uTrevor Wayne (55) iminyaka ewu-10 ebhadla ejele ngecala lokuzama ukubulala uMnu Skhumbuzo Dumisa (39), obesebenza ebhodlela-sitolo lakhe.
UWayne ugwetshwa nje, inkabi, okunguMduduzi Zikhali, isivele ingaphakathi, nayo idonsa isigwebo seminyaka ewu-10 esithole emuva kokuzivumela ukuthi ikwenzile lokhu.
Kuvele ukuthi ngesikhathi enza lokhu uZikhali, wasebenzisa isibhamu sikaWayne amnikeza sona ukuba aqede ngoMnu Dumisa. Kubikwa ukuthi ngo-2014, uMnu Dumisa uxoshwe nguWayne emsebenzini ngoba engayanga kade egula.
Emuva kokuxoshwa, uMnu Dumisa ube eseya kwaCCMA eyofaka icala ngoba umqashi engafuni ukumkhokhela imali yakhe emuva kweminyaka emine emsebenzela.
Kubikwa ukuthi uliwinile icala, inkantolo yayalela uWayne ukuba amkhokhele u-R110 000. Kuthiwa lokhu kakwehlanga kahle kuWayne, wabe esedlulisela icala enkantolo yezezisebenzi.
Kusalindwe usuku lokuya enkantolo, kubikwa ukuthi uWayne wathenga uZikhali naye okuvela ukuthi uke wamsebenzela phambilini, kodwa ubeseshayela amatekisi. Kubikwa ukuthi uZikhali ushayele uMnu Dumisa ucingo emazisa ukuthi mabahlangane edolobheni eShowe, kwazise bayazana futhi-ke ubemkweleta u-R500.
Kuthiwa uMnu Dumisa uyile edolobheni eShowe, uZikhali wamcela ukuba amlinde ngoba esayothulula abantu njengoba ebeshayela amatekisi. UMnu Dumisa uhlale kwaze kwahwalala engafiki uMduduzi.
Kuthe sekuyihora lesikhombisa, wafika wamgibelisa etekisini yakhe wabe esemcela ukuba amphelezele baye eDanyini eMlalazi, okuyilapho wamdubulela khona.
Kubikwa ukuthi esemdubulile, wawa phansi, isibhamu sajema wabe esesilahla phansi, wakhipha ummese wamhlinza esiswini, wamkhipha amathumbu. Emuva kwalokho kuthiwa wahamba wamshiya ethi ufile.
Umshushisi kuleli cala, uMnu Luvuyo Komanisi, ucele inkantolo ukuba inikeze uWayne isigwebo esimfanele ngoba walihlela leli cala.
Uveze ukuthi uMnu Dumisa kuyimanje akanayo ingalo ngenxa yesenzo sikaWayne. IMantshi uMnu Madlala Xolo, ithe leli cala libucayi ngoba belihleliwe kangangoba uWayne waze wayocela uZikhali ukuba amsize.
Ithe isihluku esasetshenziswa sibi kakhulu kanti isigwebo seminyaka eminingi simfanele uWayne. “Ngizwile ukuthi isimo sakho sempilo kasikho kahle, kodwa-ke mina bengikubona ungenalutho futhi kawekho amaphepha alethwe kimina ahambisana nalokho,” kusho imantshi.
Libe selimgixabeza ngeminyaka ewu-10 maqede lamphuca nemvume yokuphatha isibhamu. Ekhuluma emuva kwesigwebo uMnu Dumisa, uthe akeneme neze ngoba lesi sigwebo sincane kakhulu ekubeni yena walahlekelwa ngokuningi, kubalwa nengalo yakhe.
“Akukho engizokwenza, ngizokwamukela lokhu okushiwoyo. Impilo inzima manje, kangisakwazi nokusebenza njengoba ngingasenayo ingalo,” kusho yena.
Uthi yize esegwetshiwe uWayne, kodwa usayifuna imali yakhe obekumele amkhokhele yona njengoba icala liphethwe ummeli wakhe. Ummeli kaWayne, uMnu Mohumed Moola, uthe basazosicubungula isigwebo ngaphambi kokuba bathathe isinqumo sokuthi basidlulisele phambili yini isigwebo. “Leli cala ngilifice seliyophela, ikilayenti lami selivele lilahlwe yicala, ngisazobhekisisa ukuthi liqulwe kanjani bese sithatha isinqumo," kusho yena.
UMNU Dumisa ekhombisa lapho ahlinzwa khona yinkabi yamshiya icabanga ukuthi ufile.
UMNU Skhumbuzo Dumisa wanqamuka ingalo ngesikhathi ehlaselwa yinkabi abeyazi.
U-TREVOR Wayne ogwetshelwe ukuthenga inkabi ukuba ibulale uMnu Dumisa ngoba emmangalele.